डाक्टरले भने- तुरुन्तै आइसोलेसनमा बस्नू, रिपाेर्ट पाेजेटिभ « Janata Samachar
डाक्टरले भने- तुरुन्तै आइसोलेसनमा बस्नू, रिपाेर्ट पाेजेटिभ
जोखिम बढ्यो तर जिम्मेवारी फेरिएन
प्रकाशित मिति :7May, 2020 7:55 pm
काठमाडौं । स्याङ्जा पुतलीबजार– ३ का जेबी आले बेलायतमा १५ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । बेलायत जानुअघि उहाँ नेपालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ स्वास्थ्य सहायक (एचए) उत्तीर्ण गरी १५ वर्षअघि बेलायत जानु भएको हो । बेलायत पुगेर उहाँले त्यहाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)मा सेवा गर्न शुरु गर्नुभयो । आलेले बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जागिरसँगै अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउनुभयो । उहाँले ‘पोष्टग्राजुएट इन् इन्डीपेन्डेन्ट प्रेसक्राइविङ’ र ‘एमएस्सी हेल्थ एण्ड वेल’ पूरा गरिसक्नु भएको छ । अहिले उहाँ एनएचएस अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
उहाँ स्थानीय सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्यको समूहमा ‘नन् मेडिकल प्रेस्क्राइबर’ पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । ओपिडी सञ्चालन गर्ने उहाँको मुख्य जिम्मेवारी हो । क्लिनिकमा आउन नसक्ने जेष्ठ नागरिक घरघरमै पुगेर उपचार गर्नुपर्छ । त्यसमा उहाँले मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य जेष्ठ नागरिकलाई उपचार सेवा दिनुपर्छ । आले घरघरमै पुगेर जेष्ठ नागरिकको उपचार गर्दै आउनुभएको थियो । तर बेलायतमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि भने उपचारको स्वरुप बदलियो । जोखिम बढ्यो तर जिम्मेवारी फेरिएन ।
‘फोन सम्पर्कबाट काम गर्ने र अत्यन्तै जरुरी भए मात्र फिल्डमा जाने रुटिन बन्यो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन उमेर समूहमा मैले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो समूह कोरोना भाइरसको प्रकृतिमा सबै भन्दा बढी खतरापूर्ण थियो । किन कि विश्वभर नै कोरोनाबाट मर्नेको आँकडा हेर्दा अन्यको तुलनामा जेष्ठ नागरिक नै बढी छन् । जेष्ठ नागरिको स्वास्थ्य उपचारमा सक्रिय भइरहेकै बेला आलेलाई नै कोरोना लाग्यो । कोरोनाले अहिले सबैको सातो लिएको छ । सञ्चार माध्यमबाट सुनेको र देखेकै भरमा यसले त्रसित बनाएको छ । कस्तो हुन्छ कोरोना ? स्वास्थ्यकर्मीले आलेले कोरोनासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नुभयो । कोरोनासँग दुई साता लडेर त्यसलाई पराजित गर्नुभएको छ ।
कस्तो हुँदो रहेछ कोरोनासँगको प्रत्यक्ष लडाइँ ? उहाँले यसरी सुनाउनुभयो– ‘त्यसदिन म काममा नै थिएँ । दिउँसो ३ बजेतिर अकस्मात् टाउको दुख्न थाल्यो । त्यसपछि निकै जाडो महशुस भयो । प्रेसर बढ्यो, हनहनी ज्वरो आयो । ड्यूटी ५ बजेसम्म थियो । म निकै आत्तिएँ । ड्यूटी पूरा नहुँदै घर फकिँए । बेलायतको विभिन्न शहरमा कोरोना भाइरसले सताइरहेको थियो । मलाई पनि शंका लाग्यो । म आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी, समस्या डाक्टरलाई सुनाएँ । यहाँको नियमानुसार सबैजना आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत दर्ता हुन्छन् ) डाक्टरलाई फोन गरेर अवस्था सुनाएँ । डाक्टरले ‘त्यो त कोरोना संक्रमणको लक्षण हुनसक्छ, तुरुन्तै आइसोलेसनमा बस्नू’ भन्नुभयो । डाक्टरले भने अनुसार आइसोलेसनमा बसेँ । आइसोलेसनमा बसेको भोलिपल्ट परीक्षणको व्यवस्था मिल्यो । त्यो दुइदिन पछि रिपोर्ट आयो । रिपार्ट ‘पोजेटिभ’ झल्याँस्स भएँ ।
घरमा म, श्रीमती र छोरी थियाैँ। श्रीमती पनि स्थास्थ्यकर्मी नै हुन् । म पूर्ण रुपमा घरमा नै आइसोेसनमा बसेँ । आइसोलेसनका सबै नियम पालना गरेँ । आत्मविश्वास दरिलो बनाएँ । जसले गर्दा परिवारका अन्य सदस्यमा कोरोना संक्रमण भएन । परिवार तथा आफन्तबाट पनि सकरात्मक उत्प्रेरण मिलिरह्यो । यस्तो बेलामा आत्मविश्वास र परिवार तथा आफन्तजनबाट पाइने हौसला धेरै नै प्रेरणादायी हुँदाेरहेछ । संक्रमण देखिएको एक सातामै केही आराम महशुस हुन थाल्यो । दुई सातामा पूर्ण रुपमा निको भएँ । ओहो ! कोरोना, त्यसले अहिले संसारलाई नै त्रसित पारिरहेको छ । तर मैले त्यसलाई जितेँ । बिरामीको सेवा गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो । कोरोना मुक्त भएपछि अहिले म आफ्नो कार्यमा जुटिसकेको छु ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणबारे विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान भएका छन् । पछिल्लो अध्ययनले यसले स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने देखिएको छ । ‘कोरोना लागेपछि टाउको दुख्ने, स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने समेत हुने गरेको पाइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो समस्या कोरोना लागेकाहरु मध्ये ३० प्रतिशतमा देखिएको छ । कोरोनाले रक्त संचार प्रणालीमा पनि असर देखिन थालेको छ ।’
चीनमा २०-२५ प्रतिशतमा ब्लड प्रेसर बढेको पाइएको छ । ‘यसले हृदयघातको संभावना थपिन सक्छ । नयाँ लक्षणले मानव स्वास्थ्यको उपचारमा थप जटिलता हुर्न सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पनि भने प्रारम्भिक भन्दा फरक लक्षण देखिन थालेको सुनिन्छ । फरक लक्षण देखिएकाले यसबारे सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
(बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत आलेले कोरोना जितेपछि अनन्तकुमार श्रेष्ठसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
कोरोना जितेका स्वास्थ्यकर्मी